मध्यपुर्वी एसियाको गरिब देश “यमन” को एउटा वि,कट गाउँमा निशु,ल्क श,ल्यक्रि,या गर्दै डा. केसी मध्यपुर्वी एसियाको गरिब देश “यमन” को एउटा वि,कट गाउँमा निशु,ल्क श,ल्यक्रि,या गर्दै डा. केसी – Khabar Patrika Np
मध्यपुर्वी एसियाको गरिब देश “यमन” को एउटा वि,कट गाउँमा निशु,ल्क श,ल्यक्रि,या गर्दै डा. केसी मध्यपुर्वी एसियाको गरिब देश “यमन” को एउटा वि,कट गाउँमा निशु,ल्क श,ल्यक्रि,या गर्दै डा. केसी
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: १६:४०:०७
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी हिजोआज मध्यपूर्वको मुलुक य,मनमा छन्। नेपालमा को`रोना संक्र`मणको दोस्रो लहर चलिरहँदा केसी यमनको दुर्ग`म ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्। यमन अरेबियन मुलुकहरूको सबैभन्दा गरिब देश हो। त्यहाँ वर्षौंदेखि गृ’हयु’द्ध छ।
विग`त डेढ महिनादेखि यमनका वि,कट ठाउँमा रहेर अर्थोपेडिक सेवामा रहेको डाक्टर केसीले बताएका छन्। आफूले दुई वर्षदेखि यमन जाने योजना बनाइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘यहाँ इतिहासको सबैभन्दा नराम्रो सं’कट दे,खा परेको छ, यहाँको दुर्गम भेगमा म स्वेच्छिक रूपमा अर्थोपेडिक सेवा दिइरहेको छ,’ केसीले आफ्ना सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीलाई इमेलमा लेखेका छन्।
नेपालमा को`भिड संक्र`मणको दोस्रो लहरले म`हामा`रीको रूप लिएको थाहा पाउँदा आफू निकै दु:खी भएको केसीले इमेलमा लेखेका छन्। ‘यो सुनेपछि म नेपाल फर्किन्छु, जे गर्न सक्छु नेपालमै गर्छु भन्ने लागेको थियो,’ केसीले भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यवश: नेपाल आउने उडा`न बन्द रहेछ।’
केसीले आफू छिमेकी मुलुक ओमानबाट सीमापार हुँदै यमन प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनले आफू एक हप्ताभित्र अर्को यु,द्धग्र,स्त ठाउँमा जाने यो`जना रहेको बताएका छन्।आफू यमनमा भए पनि आफ्नो मन नेपालमै रहेको उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारका धेरै नेता ‘अत्य`न्त भ्र`ष्ट, निर्ल`ज्ज र अनै,तिक’ भएको बताएका छन्।
‘आफूलाई मतदान गर्ने व्यक्तिबारे उनीहरूलाई वा`स्ता छैन। तिनीहरू देश र जनतालाई लुट्नका लागि कुर्सी, माफिया, डन र का,लोब,जारीको ख्याल राख्छन्,’ केसीले भनेका छन्। केसीले नेपाली जनता उनीहरूको साहस, कर्त`व्यपना, दया, विश्वास, लचिलोपन र आ`त्मस`म्मानका लागि परिचित रहेको बताएका छन्।
‘यो गुणले हामीलाई बाँच्न र राष्ट्रको इतिहासमा धेरै संक,टको समयमा फस्टा`उन मद्दत गरेको छ,’ केसीले भनेका छन्।केसीले आफू, आफ्नो भाइ, सहकर्मीहरूले कोभिड सं`क्र`मण जितेको र त्यसको प्रमुख कारण हिम्मत, आ,त्मवि,श्वास, आशा, द`या र कर्त,व्य रहेको बताएका छन्। उनले साहस, आ`त्मवि`श्वास र आशाले चिकि,त्सा हेरचाहसँग प्रभा`व पार्ने र ग`म्भीर रो`गबाट नि`को भइने बताएका छन्।
‘नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बि`रामीहरूलाई सकेसम्म राम्रो सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। उनीहरू यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सकेजति राम्रो गर्दछन्, बि,रामी र जनताले पहिलो च´रणको को`रोना ह`राउ`न सहयोग गरे। जनताले दोस्रो चरणको संक्र`मणलाई पनि हरा`उन सहयोग गर्नेछन्,’ केसीले भनेका छन्।
केसीले को´रोनाबाट बच्न साव,धानी अप,नाउनु पर्ने बताएका छन्। ‘मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, बारम्बार हात धुनुहोस् र सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। यो देशभक्त कदम हो र यस संक´टबाट बाहिर निस्कनको लागि सबैभन्दा मह,त्वपूर्ण पनि हो। हामी जित्नेछौं,’ उनले भनेका छन्। source